မိတ်ကပ် Brush Set ပေးသွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ - China Makeup Brush Set ထုတ်လုပ်သူများ
Professional 12pcs Eye Makeup Brushes Set-Pincel Eyeshadow Brush Eyeliner Eyebrow Lip Brush များ
12pcs/Set Professional Makeup Brushes အိတ်ဆောင် ခရီးသွားမျက်နှာ မျက်လုံးများ စည်နှင့်အတူ အလှကုန် ဖောင်တိန်အစုံ
လက်ကိုင်အရှည်ဖြင့် ရောင်းချနေသော သွားပွတ်တံပုံသဏ္ဍာန် မိတ်ကပ်စုတ်တံ loose powder brush ဖောင်ဒေးရှင်း မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်
သော့ချက်အင်္ဂါရပ်များ- 1. အရည်အသွေးမြင့်၊ လက်လုပ် 2. ခိုင်ခံ့မှု၊ ခိုင်ခံ့မှု 3. အရေပြားကို လှုံ့ဆော်မှုမရှိ၊ ဓါတ်မတည့်မှုမဟုတ် 4. အရသာမရှိသော၊ လှုံ့ဆော်မှုမရှိ၊ အရေပြားအမျိုးအစားအားလုံးနှင့် သင့်လျော်မှု 5. ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေသော၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း။ကုန်ပစ္စည်းအမည် သွားတိုက်တံပုံသဏ္ဍာန် မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ် မော်ဒယ် NO BRS0001TOOTH အမှတ်တံဆိပ်အမည်- OEM/ODM Brush ပစ္စည်း- ဓာတုဖိုက်ဘာ လက်ကိုင်ပစ္စည်း- ပလပ်စတစ်လက်ကိုင် အသုံးပြုမှု- နှုတ်ခမ်းလိုင်နာ၊ ကွန်ဆီလက်လာ၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ် Brush၊ BLUSHER၊ Lip Glo...
MURAN 5PCS/LOT မိတ်ကပ်လိမ်းဆေး အလှကုန် ဘရက်ရှ် Woody Handle Man-made Fiber Portable Women's Make-up Tool
အသားအရည် အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သင့်မျက်နှာအသားရေအတွက် အန္တရာယ်ကင်းပြီး နူးညံ့ပါသည်။
ခေတ်ဆန်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်အစုံ စတိုင်အသစ်။
မင်္ဂလာပွဲ၊ ပါတီပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားတဲ့အခါ သယ်ရတာ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။
သင့်အား အချိန်တိုင်း အပြစ်အနာအဆာကင်းသော အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ပေးပါ။
အစင်းကြောင်းများ နှင့် မိတ်ကပ်အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် အလွန်နည်းသော နေရာများ မရှိပါ။
Muran 7pcs ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော Crystal Handle Empty Tube Quicksand Sequins Diamond Tablets Particles Makeup Brushes Set
ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သော မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်များအစုံ- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်ပညာရှင်နှင့် စတင်သူများအတွက် အကြီးကြီး6ခုနှင့် သေးငယ်သော စုတ်တံ ၁၂ ခု ပါဝင်သည်။မျက်နှာစုတ်တံ၊ မျက်လုံးစုတ်တံ၊ နှုတ်ခမ်းစုတ်တံ၊ ဖောင်ဒေးရှင်း ဘရက်ရှ်များသည် သင့်မျက်နှာနှင့် မျက်လုံးမိတ်ကပ်အက်ပလီကေးရှင်းအတွက် သင့်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ပျော့ပျောင်းပြီး ဖွာကင်းသော အမျှင်များ- ဤဘက်စုံသုံး ဘရက်ရှ်အစုံဖြင့် အမှုန့်၊ ခရင်မ်၊ အရည်များကို အားမစိုက်ဘဲ ရောစပ်ပြီး လိမ်းပါ။highlighter၊ concealer၊ shadow၊ liner နှင့် အခြားအရာများအတွက်။ယားယံခြင်းကင်းပြီး ထိခိုက်လွယ်သော အသားအရေများအတွက်ပင် သင့်လျော်ပါသည်။မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်...
MURAN 10pcs အလှဖန်တီးရှင်ဘရက်ရှ်အစုံ Professional 2020 ရေပန်းစားသော Marble စုတ်တံ အလှအပအတွက် မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်အစုံ
မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ် အမျိုးအစားနှင့် အသုံးပြုပုံ နိဒါန်း 1.နေ့စဉ်မိတ်ကပ်အတွက် အမျိုးမျိုးသော မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်များ ရှိပါသည်၊ ကိုယ်ပိုင်မိတ်ကပ်အလေ့အထအရ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော စုတ်တံ (၆)ခုရှိသော်လည်း အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည့် ပျားရည်မှုန့်၊ စုတ်တံ၊ concealer စုတ်တံ၊ blush brush၊ eye shadow brush၊ eyebrow brush နှင့် lip brush တို့ဖြစ်သည်။2.Honey Powder Brush : အမှုန့်မိတ်ကပ်သည် ပိုးသားအသားအရည်ရှိပြီး သန့်ရှင်းပြီး ကြာရှည်ခံသည့် မိတ်ကပ်ပါရှိပါသည်။3.Concealer Brush : ကောင်းမွန်တဲ့ စုတ်တံခေါင်းကို ပွတ်တိုက်နိုင်ပါတယ်...
လက်ကား 12PCS Rose Gold NK3 Makeup Brushes Set Face Makeup Eyeshadow Eyeliner Lip Brush Set Tool with Metal Box
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် Brush ပစ္စည်း- Synthetic Fiber ၏ မူလနေရာ- Zhejiang China မော်ဒယ်နံပါတ်- BRS012NK အသုံးပြုမှု- မျက်နှာ- နှုတ်ခမ်းလိုင်နာ၊ ကွန်ဆီလာ၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ် Brush၊ BLUSHER၊ ဖောင်ဒေးရှင်း၊ Eye Shadow ပစ္စည်းများ တစ်အုပ်လျှင် 12PCS/Set လက်ကိုင်ပစ္စည်း- Eco- ဖော်ရွေသောပန်းချီသစ်သားအခြားပစ္စည်းများကို client ၏လိုအပ်ချက်အရစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်စတိုင်: Angular Blush ...
2020 MURAN အသစ် Deisgn အရောင်းရဆုံး Brush Setများ၊ 13 PCS Brushes Blusher Face Powder Hair Soft Brush Makeup Tools Beauty Make up Brush Kit
အိမ်သုံးနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။Brush set သည် သင့်မျက်နှာ၏ မတူညီသောနေရာများတွင် မိတ်ကပ်လိမ်းရန် လိုအပ်ပြီး ဖုံးအုပ်ရန် မတူညီသော ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားများဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းသည် မျက်နှာပုံစံတိုင်းနှင့် လိုက်ဖက်ပါသည်။သစ်သားလက်ကိုင်ပါသော ပရီမီယံ ဓာတုဖိုက်ဘာပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မျက်လုံးစုတ်တံများသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ထိတွေ့မှုနှင့် ခံစားချက်များကို ပေးစွမ်းသည်။ဤမာစတာအစုံလိုက် eye brushes သည် လှပသောမျက်လုံးနှင့် မျက်နှာမိတ်ကပ်အပလီကေးရှင်းကိုထုတ်လုပ်ရန် အရည်၊ အမှုန့် သို့မဟုတ် ခရင်မ်များအတွက် စံပြဖြစ်သည်။စုတ်တံ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အားလုံးကို ဖုံးအုပ်ကာ အမျိုးမျိုးဖန်တီးနိုင်သည်...
Muran လက်ကား 10 ချပ် အရည်အသွေးမြင့် ခရုပတ်လက်ကိုင် unicorn စီးရီးမိတ်ကပ်စုတ်တံအစုံ ရောင်စုံခရု Unicorn မိတ်ကပ် Brush Set
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စုဆောင်းခြင်း မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်များသည် အရည်၊ အမှုန့် သို့မဟုတ် ခရင်မ် အလှကုန် ပစ္စည်းများ လိမ်းရာတွင် ပြီးပြည့်စုံပြီး ထုတ်ကုန်များ အညစ်အကြေးနှင့် စုတ်တံများ ကျွတ်ခြင်းမရှိဘဲ သင့်အား အချိန်တိုင်း ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဖြစ်စေသည်။ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တာရှည်ခံသော စူပါသိပ်သည်းပြီး ပရီမီယံအရည်အသွေးရှိသော အမွေးအမှင်များသည် အလွန်နူးညံ့ပြီး သင့်အသားအရေကို လိုက်ဖက်ကာ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ထို့အပြင်၊ ဘရပ်ရှ်သည် အချိန်တိုင်းတွင် အပြစ်အနာအဆာကင်းပြီး ချောမွေ့မှုမရှိဘဲ ကြာရှည်ခံသည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။အလွန်ပျော့ပျောင်း၊ သိပ်သည်းပြီး ချောမွေ့သော ဆံသားကို အာမခံသည့်ပစ္စည်းများ- 100% ကြမ်းတမ်းမှုကင်းသည်။...
12pcs အိတ်ဆောင်ခရီးသွားသစ်သားလက်ကိုင် Rose Pink Blush Powder Make Up Brushes Eyeshadow Brushes Professional Makeup Brush Set
ကုန်ပစ္စည်းအမည် 12Pcs ခရီးဆောင်ခရီးသွားသစ်သားလက်ကိုင် Rose Pink Blush Powder Make Up Brushes Eyeshadow Brushes Professional Makeup Brush Set Material Synthetic hair+ Wooden handle+Aluminum ferrule Item no.: brs0PK012WD Color စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား 24*12*2cm အလေးချိန် 195g Logo 1set စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော pu အိတ်၊ ထို့နောက် 200sets တစ်ပုံးတွင်နမူနာအချိန် 5-7days၊ စိတ်ကြိုက်လိုအပ်သည် 15-20days ထုတ်လုပ်မှုအချိန်သည်သင်၏အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး၊ 2000sets ထက်နည်းသော 15-20days လိုအပ်သည်၊ 2000sets ထက်ပိုသည်...
2020 အရည်အသွေးမြင့် 14pcs သစ်သား အလှကုန် စုတ်တံ မိတ်ကပ် ဘရက်ရှပ် သီးသန့် အညွှန်းမိတ်ကပ် ဘရက်ရှ်အစုံ
●14-PRUSH Brush COLLECTION- သင်၏မိတ်ကပ်အားလုံးအတွက် သင့်လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖုံးအုပ်ပါ။BS-MALL ရောစပ်ထားသော ဘရပ်ရှ်၊ မျက်ခုံးမွေးစုတ်တံ၊ eyeshadow brushes စသည်တို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်ပညာရှင်မှ အသုံးပြုသည့်မိတ်ကပ်နှင့် ဆင်တူသော ရလဒ်များကို ပေးနိုင်ပါသည်။
●FIT EVERY FACE - မျက်လုံးမိတ်ကပ်ဘရပ်စ်များသည် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနှင့် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့် မျက်နှာပုံစံတိုင်းအတွက် contouring & highlighting များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
●Vegan & Cruelty-Free Bristles- အမွေးအမှင်များသည် တာရှည်ခံ ဓာတုဖိုက်ဘာ-နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော နိုင်လွန်ဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကြာရှည်အသုံးခံရန် အာမခံပါသည်။မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်အားလုံးသည် နူးညံ့ပြီး အကြမ်းဆုံးဖြစ်ပြီး ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရေများအတွက်ပင် သင့်လျော်သည်။ကြီးမားသော စွမ်းအားဖြင့် ချုပ်ကိုင်ထားသည်။ဒါဖြင့် Brush များသည် အပြစ်အနာအဆာကင်းသောအသွင်ကိုဖန်တီးရန် အထောက်အကူကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
လက်ကားအလှပြင်ကိရိယာများ7PCS စိန် Sequin Make-up Brush Set ပါသော Quicksand Brush Sets
[SOFT DENSE BRISTLES]- မိတ်ကပ်ဘရပ်စ်များသည် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတုအမျှင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် နူးညံ့ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော အထိအတွေ့ကို ခံစားရစေကာ အရေပြားကို မထိခိုက်စေဘဲ အထိခိုက်မခံသော အသားအရေနှင့်ပင် သင့်လျော်ပြီး အရည် သို့မဟုတ် ခရင်မ် အမျိုးအစားမရွေး အသုံးပြုရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
[ဖယ်ရှားခြင်းမပြုပါ]- စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အလွိုင်း၊ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သင့်မျက်နှာပေါ်တွင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း မရှိပါ။
[GREAT VARIETY BRUSHES]- ဤဘက်စုံသုံး ဖောင်ဒေးရှင်း Powder Concealers Eye Shadows Makeup Brush Sets များဖြင့်၊ အမှုန့်၊ အသားပို၊ ကွန်ဆီလာ၊ အရိပ်၊ လိုင်နာနှင့် အခြားအရာများကို အားစိုက်ထုတ်ပြီး ရောမွှေပါ။မိတ်ကပ်စတင်အသုံးပြုသူများနှင့် ဝါသနာရှင်များအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Rose gold Glitter Handle 10pcs crystal စိန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဘရပ်ရှ် PU အိတ် မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်
Brush set သည် သင့်မျက်နှာ၏ မတူညီသောနေရာများတွင် မိတ်ကပ်လိမ်းရန် လိုအပ်ပြီး ဖုံးအုပ်ရန် မတူညီသော ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားများဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းသည် မျက်နှာပုံစံတိုင်းနှင့် လိုက်ဖက်ပါသည်။
သစ်သားလက်ကိုင်ပါသော ပရီမီယံ ဓာတုဖိုက်ဘာပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မျက်လုံးစုတ်တံများသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ထိတွေ့မှုနှင့် ခံစားချက်များကို ပေးစွမ်းသည်။
ဤမာစတာအစုံလိုက် eye brushes သည် လှပသောမျက်လုံးနှင့် မျက်နှာမိတ်ကပ်အပလီကေးရှင်းကိုထုတ်လုပ်ရန် အရည်၊ အမှုန့် သို့မဟုတ် ခရင်မ်များအတွက် စံပြဖြစ်သည်။
မျက်နှာမိတ်ကပ်အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးရန် အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အားလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားပြီး၊ ထူးခြားသော ဘရပ်ရှ်အစုံသည် သင့်လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးကာ သင့်သဘာဝအလှကို ပြသနိုင်ပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းသော မိတ်ကပ်ကို ချန်ထားနိုင်သည်။
မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်များ၏ လက်ကိုင်များကို အဆင့်မြင့်အလွိုင်းနှင့် သစ်သားပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။သယ်ရလွယ်ကူပြီး ကြာရှည်အသုံးခံပါတယ်။
မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်အစုံ၏ အမွေးအမှင်များကို တာရှည်ခံဓာတုဖိုက်ဘာဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော နိုင်လွန်။ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနှင့် အသားအရေနှင့် လိုက်ဖက်မှုမရှိပါ။ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်